ARKit သည်ဤဥပမာများတွင်ကြီးမားသောဖြစ်နိုင်ချေများကိုပြသနေသည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
အများစုသည် Augmented Reality ၏အဆိုအရ iOS ကိုနောက်ကျမှရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ developer များနှင့်သုံးစွဲသူများကယခုထိတိုင်အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သော်လည်းအတော်အတန်ငြင်းခုံစရာရှိသည်။ iOS 11 ပါသော Apple သည် ARKit ၏ကျေးဇူးကြောင့် application များနှင့်ကိရိယာများကိုဤနည်းသစ်ဖြင့်အပြည့်အဝအသုံးချလိမ့်မည်.
အက်ပလီကေးရှင်းကိုအက်ပလီကေးရှင်းများပေးထားသည့်ကိရိယာများသည်၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုအခွင့်ကောင်းယူနိုင်သည် လွန်ခဲ့သောတစ်လကပင်ကြေငြာခြင်းမရှိသေးသည့်အချိန်တွင် iPhone နှင့် iPad ရှိ Augmented Reality ကသူတို့၏ပထမဆုံးအသီးများကိုပေးခဲ့သည်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများရှိသော်လည်းအရာရာတိုင်းက၎င်းသည်လက်ရှိအသေးစားစီမံကိန်းများ၏ဤဗီဒီယိုများတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၎င်းသည်တကယ့်ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအကြံပြုသည်။
မီတာတစ်ခုအနေနှင့်အခြေခံကျသည့်အရာတစ်ခုမှာ Augmented Reality သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကို ကျော်လွန်၍ မည်ကဲ့သို့ကျော်လွှားနိုင်သည်ကိုအကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနည်းပညာအသစ်အကြောင်းပြောဆိုသောအခါသတိရသင့်သည်။ သင်၏ iPhone နှင့် iPad သည်သင်အမြဲတမ်းသယ်ဆောင်ရသောအသုံးဝင်သောတိုင်းတာရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာသည်.
သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့ ARKit ရဲ့ bombshell ဖြစ်လတံ့သောဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုအကြောင်းကိုမေ့လျော့တော်မနိုင်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရုံးခန်းကိုစင်မြင့်တစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သောအခါဂန္ထဝင်မာရီယန်သည်အံ့သြစရာဖြစ်လာသည် ဒီဥပမာထဲမှာရှိသကဲ့သို့။
IKEA သည် Augmented Reality အက်ပလီကေးရှင်းကိုစတင်ရန်စတိုးဆိုင်သို့မသွားမီ၎င်း၏ပရိဘောဂနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုသင့်အခန်းထဲတွင်တွေ့မြင်ရန်အခြားနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေခဲ့ကြသည်။ ဒီဥပမာမှာမည်သည့်စတုရန်းမှာမဆိုလေယာဉ်တစ်စင်းကိုဘယ်လိုမြင်နိူင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည် အဲဒီမှာရှိသကဲ့သို့, ပင်၎င်း၏အတွင်းပိုင်းကိုရယူသုံး။
ကားမောင်းခြင်းဂိမ်းများသည် ARKit နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်တစ်မျိုးကိုယူနိုင်သည်, ဒီရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာမှာသရုပ်ပြအဖြစ်ကျနော်တို့အိမ်၏လသာဆောင်ကနေကားတစ်စီးရပ်ဖို့အတွက်။
မင်းရဲ့အိပ်ခန်းကြမ်းပြင်မှာရေတပ်စစ်ပွဲရှိလား။ နည်းဗျူဟာဂိမ်းများသည်သမားရိုးကျဘုတ်ပြားများမှထွက်ခွာနိုင်ပြီး room ည့်ခန်းစားပွဲတွင်နေရာယူနိုင်သည်၊ သို့သော်သင့် iPhone သို့မဟုတ် iPad ကိုအသုံးပြုပြီးသင့်ကိုအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်ရန်နီးကပ်သည်။
ဤရွေ့ကားသေးငယ်တဲ့ developer များသို့မဟုတ်လွတ်လပ်သော developer များပင်၏ကွန်ယက်တွင်တွေ့နိုင်သောဥပမာအချို့ဖြစ်သည်။ ဗီဒီယိုဂိမ်းကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏အလောင်းအစားများကိုစတင်ပြသသောအခါမည်သည့်အရာကိုတွေ့မြင်ရမည်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ Augmented Reality အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 11 » ARKit သည်ဤဥပမာများတွင်ကြီးမားသောဖြစ်နိုင်ချေများကိုဆက်လက်ပြသခဲ့သည်